Accueil > Gazetin'ny nosy > Lapan’ny fitsarana Anosy: Nisy namaky ny sabotsy teo
Lapan’ny fitsarana Anosy: Nisy namaky ny sabotsy teo
Nisy namaky ny sabotsy teo ny lapan’ny Fitsarana etsy Anosy. Raha ny vaovao fantatra taorian’ ny fanadihadiana nataon’ ny mpitandro ny filaminana dia nisy antontan-taratasy mahavoasaringotra tompon’andraikitra ambony ara-panjakana teo aloa, voasokajy ho « Grand dossier « , isan’ny tamin’ io fotoana io.
Omaly alahady ihany dia re fa efa nisy olona 2 hanaovana fanadihadiana eny anivon’ny polisy misahana ny ady heloka bevava Anosy, izay zanaka mpanao politika akaiky an’io tompon’andraiki-panjakana ambony teo aloha io sy Mpisolovava akaiky azy.
Manitikitika ny saina momba izany tranga izany ny fahasahian’ireny olom-panjakana voarohirohy amin’ny raharahan-keloka ireny hanana fahasahiana maniraka olona hamaky biraom-pitsarana toa izany. Tsy matoky ny tenany hahazo famotsoran-keloka ve ry zalahy ireny raha mandeha amim-pahatsorana ny raharaha ? Mbola te hanohy ny ratsy vitany teto tokoa ry zalahy ka mitetika ny hahazo ny fahefam-panjakana indray, ka na iray ny famotsoran-keloka amin’ny alalan’ny fampihavanam-pirenena no hanome alalana azy ireny hofidiana ka hahatafaverina azy eo anivon’ny fahefam-panjakana na halatra antontan-taratasin-keloka toa izao, dia hoe « madio araka ny lalàna momba ny ady heloka ry zalahy».